တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ မှပြန်လည် ရောက်ရှိ | cincds
Submitted by myintmyat on Sat, 04/27/2019 - 13:45
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ - ၂၇
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shouigu နှင့် ရုရှား-မြန်မာ စစ်ဘက်နည်းပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ၏ဖိတ်ကြားချက်အရ စိန့်ပီတာစဘတ်မြို့တွင်ရောက်ရှိနေသည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဧပြီ ၂၆ ရက် ညနေပိုင်းတွင် Pulkovo -3လေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာတပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ အား ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်စိုးမိုး၊ ရုရှားတပ်မတော်ရေတပ်မှ Commander Dmitry Krainov နှင့် တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နေ့လယ်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်လေဆိပ်သို့ရောက်ရှိကြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Nikolay A. Listopadov၊ ဒုတိယစစ်သံမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားသည့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနိုင်နှင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ ပြန်လည်လိုက်ပါလာပြီး ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် (၈)ကြိမ်မြောက် မော်စကိုနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေး ဆိုင်ရာညီလာခံ (8th Moscow Conference on International Security) သို့တက်ရောက်ခြင်း နှင့်ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံအစိုးရနှင့် တပ်မတော်မှအကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ Ulan-Udeမြို့၊ Irkutsk မြို့၊ Murom မြို့၊ Saint Petersburg မြို့နှင့် Moscow မြို့တို့ရှိ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအား ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း၊ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေချိုရေအိုင်ဖြစ်သည့် Baikalရေကန်နှင့်ရုရှားနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထင်ကရနေရာများအားလေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
နပွေညျတျော၊ ဧပွီ - ၂၇
ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ ကာကှယျရေးဝနျကွီး Army General Sergey Kuzhugetovich Shouigu နှငျ့ ရုရှား-မွနျမာ စဈဘကျနညျးပညာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ကျောမတီ၏ဖိတျကွားခကျြအရ စိနျ့ပီတာစဘတျမွို့တှငျရောကျရှိနသေညျ့ တပျမတျော ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ဧပွီ ၂၆ ရကျ ညနပေိုငျးတှငျ Pulkovo -3လဆေိပျမှ ပွနျလညျထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာတပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ အား ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံဆိုငျရာမွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ကြျောစိုးမိုး၊ ရုရှားတပျမတျောရတေပျမှ Commander Dmitry Krainov နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသော မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေ့လေ့ယျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောလဆေိပျသို့ရောကျရှိကွရာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး)ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး (ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီးမွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျော၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျ တိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E. Mr. Nikolay A. Listopadov၊ ဒုတိယစဈသံမှူးနှငျ့တာဝနျရှိသူမြားကကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါသှားသညျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မငျးနိုငျနှငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား ပွနျလညျလိုကျပါလာပွီး ခရီးစဉျအတှငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ (၈)ကွိမျမွောကျ မျောစကိုနိုငျငံတကာလုံခွုံရေး ဆိုငျရာညီလာခံ (8th Moscow Conference on International Security) သို့တကျရောကျခွငျး နှငျ့ပါဝငျဆှေးနှေးခွငျး၊ ရုရှားဖကျဒရေးရှငျးနိုငျငံအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောမှအကွီးအကဲမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးခွငျး၊ Ulan-Udeမွို့၊ Irkutsk မွို့၊ Murom မွို့၊ Saint Petersburg မွို့နှငျ့ Moscow မွို့တို့ရှိ စဈဘကျဆိုငျရာ စကျရုံ၊ အလုပျရုံမြားအား ကွညျ့ရှုလလေ့ာခွငျး၊ ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံးရခြေိုရအေိုငျဖွဈသညျ့ Baikalရကေနျနှငျ့ရုရှားနိုငျငံ၏ ထငျရှားသော သဘာဝပတျဝနျးကငျြ အထငျကရနရောမြားအားလလေ့ာခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။